सुन्दरीको क्राउनमा कुरुप धन्दा – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ भाद्र ८ गते शुक्रबार ११:४६ मा प्रकाशित
सन् १९२१ अघिसम्म ब्यूटी कन्टेस्ट अर्थात् सुन्दरी प्रतियोगितालाई त्यति सम्मानले हेरिदैनथ्यो । १९२१ मा आयोजित पहिलो मिस अमेरिकाले मानिसहरुको दृष्टिकोणमा केही सकरात्मक सोचकाे विकास गरिदियो ।
मिस अमेरिकाको क्रेज नियालिसकेपछि १९५० मा केही संस्थाहरुले उस्तै थिममा कार्यक्रमहरु गर्न थाले । केही प्रतियोगिता सफल पनि भए । केहि ‘मिस डनट क्वीन कन्टेस्ट’ जस्तै फ्लप भए ।
१९५१ मा सुरु भएको मिस वल्र्ड, १९५२ को मिस यूनिभर्स र मिस यूएसए, १९६० को मिस इन्टरनेसनल र १९६८को मिस ब्ल्याक अमेरिकाका चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन् ।
यिनै प्रतियोगितालाई पछ्याउँदै विश्वभर यसको क्रेज बढ्दै गयो । विशेषतः युवतीहरुलाई सुन्दरीको उपमा सहित शिरमा पहिर्याउने ताजको लोभ बढ्दै गयो ।
अलिक पहिलेसम्म युवतीहरुको फिजिकल अपियरेन्सलाई मात्र आधार मानी ताज पहिराइन्थ्यो । विकासक्रमसँगै आज सुन्दरी प्रतियोगिताहरुलाई ‘ब्यूटी विथ ब्रेन’को आड लगाइदिएर धकेलिएको देखिन्छ ।
सुन्दरी प्रतियोगितामाथी चलेका डिबेट
लेखिका कर्टन इ मार्टिनले न्यू योर्क टाइम्समा ‘ब्यूटी पेजेन्ट, लाइक मिस अमेरिका सुड डाई’ शीर्षकमा सन् २०१४मा डिबेट चलाइन् । यस्ता कन्टेस्टहरुले महिला,युवतिहरुको वास्तविक सौन्दर्यतामा प्रश्न उठाएको उनको तर्क छ । ब्यूटी पेजेन्टलाई उनले ‘मनि मेकिङ मसिन्स’को संज्ञा दिएकी छन् । भन्छिन् ‘सुन्दरता अर्गानिक, प्राकृतिक हुन्छ , प्रतियोगिता हुँदैन ।’
मार्टिनले मिस अमेरिका अन्त्य हुनेपर्ने डिबेट चलाएको झण्डै ४ वर्षपछि नेपालको सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा वन्दना ढकालको ‘सुन्दरी प्रतियोगिता अर्थात अभौतिक महिला हिंसा’ शीर्षकमा विचार आयो ।
‘गोरो अनुहार, उचालिएको वक्ष, ख्याप्प टाँसिएको पेट, नापो पुगेको उचाइ, जोख्दा ठिक्कको तौल, एकै किसिमको बोली, कम्मर लच्काउने हिँडाइ (क्याटवाक), हाँस्दा खित्का छाड्ने वा मुख बाउने होइन ठिक्क हाँस्नु पर्ने, लाली पोतिएका ओठ, टाँसेका परेला, दुई चार वटा रटेका प्रश्नका उत्तर । यिनै फम्र्याटमा तयार पारेर ल्याइएका बीस र बाइस थान प्रतियोगीको मञ्चीय प्रदर्शनबाट एक मिस नेपाल ।’ वन्दनाले नेपालमा आयोजना हुने मिस निपाल बारे टिप्पणी गर्दै लेखेकी थिइन् ।
डिबेटहरु चलिरहँदा आयोजकहरु भने यि कुरा स्वीकार्न कत्ति पनि तयार देखिदैंनन् । ब्यूटी मात्रै नभएर स्कील र नलेजको पनि मुल्यांकन हुने उनिहरुको तर्क रहन्छ ।
टोले सुन्दरी प्रतियोगिताहरुको बाढी
१२ महिनामा पोखरामा मात्रै २५ भन्दा बढी सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना हुन्छन् । २५ भन्दा बढीले सुन्दरीको ताज पहिरिन्छन् ।
मिस पोखरा, मिस एसइइ पोखरा,मिस हस्पीटालिटी, मिस नेवा पोखरा पुचः, मिस पोखरा जुनियर, मिस तामाङ पोखरा, मिस गर्जियस पोखरा, मिस डिभा पोखरा, लिटल मिस पोखरा, मिस्टर एण्ड मिस पोखरा कल्चर, मिस टिन पोखरा, मिस्टर एण्ड मिस कास्की, मिस हेरिटेज पोखरा, मिस क्वीन लेखनाथ, आदि आदि ।
यी केहि पोखरामा आयोजना हुने सुन्दरी प्रतियोगिताका नाम हुन् । यसबाहेक पनि धेरै छन् मिस फलानो फलानो नाम राखेर आयोजना हुने प्रतियोगिताहरु ।
प्रश्न उठ्छ । यि प्रतियोगिताले युवतिहरुको सामाजिक, मानसिक स्तरोन्नती गरेको छ त ?
कन्टेस्टेन्ट कि टिकट सेलर ?
‘दाई एउटा हेल्प गर्नुपर्यो’ फेसबुकमा म्यासेज आयो । ‘कस्तो हेल्प ?’ मैले रिप्लाई गरें । ‘एउटा ब्युटि पेजेन्टमा भाग लिएको छु । टिकट किन्दिनुन ।’
म अलिक नर्भस भएर रिप्लाई गरें ‘किन नि टिकट किन्नुपर्ने ?’ । स्माइलको इमो सँगै उनले म्यासेज गरिन् ‘५०० को टिकट किन्यो भने २ माक्र्स आउँछ अनि १००० को ४ माक्र्स ।’ मैले ‘आइ विल गेट यु लेटर’ भन्दै संवाद अन्त्य गरें ।
पोखरामा फिनाले हुन गइरहेको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताको लागि उनले मलाई टिकट किन्न आग्रह गर्दे थिइन् । यसबाट नै थाहा हुन्छ, सुन्दरी प्रतियोगिताको नाममा हुने विकृति ।
प्रतियोगितामा भाग लिनेहरुलाई आयोजकहरु यसरी नै टिकट किन्न लगाउँछन् । यो पुरानो घटना भने होइन । अधिकांश यस्ता खाले प्रतियोगिताहरुमा दोहोरिने घटना हो यो ।
प्रतियोगिताहरुले क्षमता बृद्धि र बोद्धिक विकास भन्दा पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कमाउने धन्दाको रुपमा आयोजना गरिने पाइएको छ । मोडलिङमा रुचि राख्नेहरु बिशेषतः बुझ्दै नबुझी प्रतियोगितामा सहभागी भइहाल्न् ।
जब फिनाले नजिकिन्छ अनि उही टिकटको किनबेच । यस्ता घटना अधिकांश आयोजित प्रतियोगितामा हुने गरेपनि प्रतियोगिहरु मुख खोल्न भने चाहदैनन् । उनीहरु श्रोत नखुलाउने सर्तमा पनि जानकारी दिन चाहदैनन् । यो त मेरो फेसबुकमा भएको संवाद मात्र हो ।
मोडलिङमा रुचि भएकाहरु यसैमा केहि गर्छु भनेर आएका हुन्छन् । तर यसरी टिकटका आधारमा भोट किन्न लगाएर बनाइने कार्यक्रम नराम्रो त यसै भइहाले, नेपालमा हुने राम्रा र गुणस्तीय सुन्दरी प्रतियोगिताको समेत छवि विगार्दै लैजानेमा दुई मत छैन ।
सुन्दरी प्रतियोगिताको म्याथम्याटिक्स
सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना गरिरहँदा यसको खर्च र आम्दानी के कति आउँछ ? यसको आंकलन गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नर्मल प्रतियोगिता ५ देखि ६ लाखसम्ममा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यति रकममा उम्क्याइने प्रतियोगितामा जालझेली बढी हुनसक्छ ।
घोषणा गरिएको पुरस्कार नदिने । प्रतियोगिहरुसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउने लगायतका कुरुप कार्य हुन्छन् । ६ लाख मध्ये स्टेज र हलमा केही खर्च हुन्छ । स्वीमिङ, ट्राभलिङमा अलिकति खर्च गरिन्छ र बाँकी आयोजककै खल्तीमा । यसले पोखरामा क्वान्टिटी मात्रै थप्ने काम गरेको छ ।
पोखरामै आयोजना हुने अलिक धेरै धनराशीको प्रतियोगिताको खर्च १५ लाखसम्म भेट्छ । यि प्रतियोगिताको पुरस्कार राशी नै ५ लाख हारहारीमा राखिन्छ । नगद र जिन्सी सहित ।
यसलाई स्टाण्डर्ड लेभलको प्रतियोगिता भन्न मिल्ने स्रोतले जनायो । यसरी खर्चिएर आयोजना हुने प्रतियोगिताको म्यानेजमेन्ट खर्च नै बढी हुन आउँछ ।
इट्स नट अन्ली अबाउट फिजिकल लुक्स
मिस टिन, सेकेण्ड रनर अप
ब्यूटी पेजेन्ट आफैंमा नराम्रो होइन । यसले साँच्चै नै एक खालको कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्छ नै, सँगै अवसरहरुको मार्ग पनि खोलिदिन्छ । तर, यसको क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटी मात्रै बढ्नु चाहीं दुखद हो । मसँग पनि कत्ति बहिनीहरुले कन्सल्ट गरेका हुन्छन् । टिकट बेच्नु पर्ने अथवा अरु केही । यस्तो सुन्दा मन अमिलो हुन्छ ।
धेरै आयोजना गर्नुभन्दा थोरै गरौं, राम्रो गरौं । क्राउन लगाएर मात्रै पनि सुन्दरी भइने होइन, नलगाएपनि सुन्दरी नभइने होइन । इट्स नट अन्ली अबाउट फिजिकल लुक्स । ज्ञान, कला, नलेज पनि उत्तिकै चाहिन्छ । एण्ड या, टाइटल क्राउन अन्ली कान्ट रिफ्लेक्ट ब्यूटी ।
क्वालिटी र कन्टेस्टको ब्यग्राउण्ड बुझेर जाँदा राम्रो
सेकेण्ड रनर अप, मिस गण्डकी सिजन ३
पहिलो कुरा, पोखरामा छ्यापछ्याप्ती ब्यूटी पेजेन्ट हुनु दुखत कुरा हो । भन्नेहरु यसले युवतिहरुको क्षमता अभिबृद्धी गराउँछ भन्ने तर्क गर्छन् । अहिले इन्टरनेट मार्फत नै क्लास लिन सकिन्छ । फर्म भर्दाको एक्साइटेसन जति फिनाले नजिकिदै गर्दा सकिन्छ । के सिकें ? भन्ने कुरा नै विर्सिए जस्तो हुन्छ ।
बरु विश्वासिला वेभसाइटहरु अध्ययन गरेर त्यहाँ भन्दा बढी सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । सेल्फ प्राक्टिस गर्ने नि । र्याम्प मै क्याटवाक गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । आगामी दिनमा ब्यूटी कन्टेस्टमा पार्टिसिपेट हुन्छु भन्ने साथीहरुलाई नजानुस् नै त भन्दिनँ । तर, क्वालिटी र कन्टेस्टको ब्यग्राउण्ड बुझेर जाँदा राम्रो हुन्छ । मार्केटमा असरल्ल पाइने टिलिक्क टल्केको क्राउनले मात्रै सुन्दरता मापन गर्दैन, भन्ने मेरो ठम्याई हो ।
आयोजकहरुले मागी खाने भाँडो बनाइरहेका छन्
मिस पोखरा २०१६, विजेता
म सधै ब्यूटी कन्टेस्टको पक्षमा नै छु । यसले महिला सशक्तिकरणमा अहम् भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, अहिले आयोजना हुने सबै प्रतियोगिताहरु भने ठिक छन् जस्तो लाग्दैन ।
आयोजकहरुले यस्तो प्रतियोगिताहरुलाई मागी खाने भाँडो बनाइरहेका छन् । एउटा नर्मल लेडीजलाई हजारौंको अघि कन्फिडेन्ट बनाउन यसले ठुलो मद्धत गर्छ । टाइटल क्राउन नै लगाउन नपाएपनि एउटा म पनि विनर हो है भन्ने फिलिङ्स यसले ल्याउँछ । सफल ब्यूटी कन्टेस्ट त्यो हो, जसले भित्री सुन्दरतालाई पनि अर्थ राखेको हुन्छ ।
इगो सेटिस्फ्याक्सनका लागि मात्रै पनि प्रतियोगिता आयोजना गरेको सुनिन्छ
१० बर्ष भयो यो फिल्डमा होमिएको । सुरुका दिनहरुमा न्यून मात्रै प्रतियोगिताहरु हुन्थे । अहिले ३ दर्जन बढी हुन्छन् । संख्या धेरै हुनुलाई मात्र पनि नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर गुणस्तर पनि कायम गर्नुपर्ने हो ।
यहाँ इगो सेटिस्फ्याक्सनका लागि मात्रै पनि प्रतियोगिता आयोजना गरेको सुनिन्छ । यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने इगो लिएर आयोजना गरिएका कार्यक्रम त्यति सफल हुँदैनन् ।
अर्को कुरा, यस्ता प्रतियोगितालाई युवतीहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्न अवश्य ठुलो मद्धत गर्छ । हामीले उनीहरुलाई ट्रेन गरेका हुन्छौं । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग इन्टर¥याक्सन गराउँछौं । यसले गर्दा उनीहरुलाई अगाडी सम्भावनाका मार्गहरु प्रशस्त हुन्छन् ।
सुन्दरताको अर्थ गोरो छाला, पर्फेक्ट बडी साइज मात्रै पनि होइन
अायाेजक, हस्पीटालिटी कन्टेस्ट
मैले आयोजना गरेको हस्पिटालिटी कन्टेस्ट नेपालमै पहिलो प्रयास हो । यसमा बडी साइज अथवा हाइट, लुक्सबारे खासै महत्व दिइंदैन । हस्पिटालिटी सेक्टरमा आवश्यक ड्रेस र पर्सनालिटिबारे ख्याल गरिन्छ ।
कन्टेस्टेन्टहरुको स्तरबृद्धिका लागि यस सेक्टरका अनुभवी व्यक्तिहरुसँग इनटर्याक्सन गराउँछौं । हस्पिटालिटि र टूरिज्म इण्डस्ट्रीबारे जानकारी दिन्छौं । यसको इतिहास र वर्तमान अनि भविष्यबारे ज्ञान प्रदान गर्नु हाम्रो उद्धेश्य हो । सुन्दरताको अर्थ गोरो छाला, पर्फेक्ट बडी साइज मात्रै पनि होइन । कन्टेस्टेन्टको ट्यालेण्ट पनि उसको सुन्दरता हो ।
एउटै थिममा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरुले यसप्रतिको क्रेज घटाउन नसक्ला भन्ने लाग्दैन । जहाँसम्म टिकट बेच्ने कुरा छ, त्यो कुरुप बाटोमा हामी छैनौं । स्पोन्सर, सहयोगदाताहरु खोज्छौं ।
नरप्रसादलाई शीतल ज्योतिको नेतृत्व